Naya Bikalpa | » चिनिया ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’को नेपाल संस्करण चिनिया ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’को नेपाल संस्करण – Naya Bikalpa
चिनिया ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’को नेपाल संस्करण
प्रकाशित मिती: २०७६ असार २, ०९: ०६: ०७
नेकपाको दुइतिहाइको सरकाले वास्तवमा नै नेपालमा चिनमै व्यापक आलोचना भएको सांस्कृतिक क्रान्तिको नेपाली संस्करण उतार्न खोजेको हो ? खासगरी उपत्यकामा यो प्रश्न घरघरमा उठन थालेकोे छ ।
निजी सम्पत्तिबाट खडाभएका गुठीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने विधेयक प्रस्ताव भएपछि सुरु भएको यस्तो प्रश्न अव आन्दोलनमा रुपान्तरित हुँदै आमनागरिकलाई यसले सडकमा उतार्ने काम गरेका पाइयो । खासगरी उपत्यकाको एउटा समुदाय गएको हप्तादेखि करिव–करिव सडकमानै छ भनेपनि हुनेभएको अवस्था छ ।
इतिहासमा लेखिएअनुसार पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिन काठमाडौं आक्रमण गरेपछि मल्ल राजाको शासन अन्त्य भई एकीकृत नेपालको राजा भएको इतिहास प्रायः सबै नेपालीलाई थाहा छ । उनले काठमाडौं विजयसँगै कुमारीको दर्शन गरी चलि आएका रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको रक्षा हुन्छ भनी आश्वस्त पारेकाले स्थानीय जनताको मन जितेका थिए ।
उनले भूमि लिय । तर संस्कृति छोएनन मात्र होइन त्यसलाइनै माने जसको परम्परा अहिलेसम्म कायम छ । जस्तो आजसम्म कुमारी, गणेश र भैरवको पूजा हुन्छ ।
राजा हुँदा राजाले र अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा इन्द्रजात्राको दिन वसन्तपुर गई कुमारी समेतको ढोगभेट गर्ने र धुमधामसित पूजा गर्ने चलन कायम छ । अस्ति भरखरमात्रै राष्ट्रपतिले भोटोजात्रा हेरेको उदाहरण सस्कृतिको जगेर्नाको प्रमाणपनि हो ।
तर नेकपाको सरकारको अहिलको प्रस्तावले भने त्यस्ता संस्कृतिहरुलाई समाप्त गर्छ । समाप्त मात्र होइन तिनको राष्ट्रियकरण करण गरेर त्यसको अवशेषपनि मेटन खोजेको जस्तो देखिन्छ जस्तो माओको समयमा चीनमा भएको थियो ।
पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए यस्तो परम्परा मेट्ने सन्दर्भमा । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमान ढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो ।
तर यी दुवै प्रयोग पुरै असफल भए । यी दुवै कार्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका थिए । यतिबेलापनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री नै छन । अहिलेका प्रधानमन्त्री फेरि अर्को प्रयोग गर्दै छन, गुठी सम्बन्धमा नयाँ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेर ।
संसदमा पेस भएको यो विधेयकबारे निकै समय चर्चा भएन, त्यति बेला सरोकारवालाहरूले सायद जानकारी नै पाएनन् । तर जानकारी चुहिएपछि यसको विरोधको मात्रा बढ्दो छ र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध जनाउनेहरूमाथि राज्यले लाठी चार्ज र पानीको फोहराको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको स्थिति पैदा भयोे ।
शताव्दी पुरषका शब्द
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी पनि सरकाले बेला न कूवेला गरेको आफैलाई नास गर्ने एक एउटा काम भन्छन् । तीनचार दिन पहिले पाटनमा जस्तो जनसमुदाय प्रकट भयो तयसलाई उनी सरकारले सडकमा उतारेको अस्था भनछन । परम्परासँग मान्छेको एकदमै बाक्लो र घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । गुठी पनि नेवारहरूको निम्ति संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको विषय हो ।
यस्तो गम्भीर विषयमा हात हालेर सरकारले बेमौसमी राग अलापेको छ । शक्तिशाली सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू कम थिएनन् । काठमाडौं उपत्यका बासीलाई मेलम्चीको पानी मात्र खुवाउन सकेको भए साराले मान्ने थिए । गर्नुपर्ने काम एकातिर छ, त्यसलाई वास्तै नगरेर नचाहिने काममा किन हात हालेको हो, मैले बुझेको छैन ।
उनका अनुसार यो काम कसैले माग्द नमागि र आवश्यकतानै नभएको बेलामा भयो । न कसैले मागेको छ, न कसैले यो विषय उठाएको छ । यो त आफ्नो विनाश आफैंले खोजेजस्तो देखियो । गुठी भनेको हिजो–अस्तिको परम्परा होइन । लिच्छवि राजा शिवदेव र अंशुवर्माकै पालाका शिलालेखमा ‘गोष्ठिका’ शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ ।
बाजागाजा गर्न त्यतिबेलै ‘बादित्र गोष्ठिका’ थियो । राजकुलोदेखि धारासम्म पानी प्रबन्ध गर्न ‘पानीय गोष्ठिका’ थियो । गुठी त्यही ‘गोष्ठिका’ बाट आएको हो । लेलेको लिच्छविकालीन शिलालेख हेर्ने हो भने त्यो बेला ‘पानीय गोष्ठिका’ ले लेले, चापागाउँ, सानोगाउँ, ठेँचो, सुनाकोठी जम्मैतिरबाट पानी ल्याएर पाटन, टुँडिखेलका चार पोखरी भरेको पाइन्छ । त्यही पानी पाटन अस्पतालको पोखरी हुँदै जावलाखेलको ठूलो पोखरीसम्म ल्याइएको थियो ।
सहरमा पानीको प्रबन्ध मिलाउन यति बलियो सञ्जाल मिलाउने काम गुठीले नै गरेको हो । गुठीका माध्यमबाट सर्वसाधारणले नै सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको काम अहिले सिंगो राज्य लाग्दा पनि लथालिंग छ । यत्रो प्रयास र बजेट लगाउँदा पनि सरकारले काठमाडौंबासीलाई देखाएको मेलम्ची सपना पूरा गर्न सकेको छैन । आफ्नो भएको परम्परा ध्वस्त पारेपछि आउने परिणाम भनेको यस्तै हो । यतिबेला सरकराको यस्तो रवैया समाजको बलियो हैसियतलाई छिन्न–भिन्न पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पाँच कारणले त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो, यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो ।
संविधानको धारा २९० बमोजिम संघीय संसदले ऐन बनाउँदा पनि प्रदेशको अधिकारमा आघात पार्न पाइँदैन, तिनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । दोस्रो, किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो । तेस्रो, ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ ।
साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिने छन् । चौथो, संविधानको धारा २६(२) ले प्रदान गरेको हकप्रतिकूल सम्प्रदायको अहित हुने गरी यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
पाँचौं, गुठीका महत्वपूर्ण जग्गा उपयोग गर्ने नाममा पच्चीस वर्षका लागि लिज करारमा दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । मूल्यवान् जग्गा भएको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जसरी व्यक्तिविशेषमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यही शृंखलाको यो अर्को उदाहरणीय विधेयक हो ।
अबुझ होइनन गुठी वाला काठमाडौंका नेवारहरूले प्रविधिको महत्व नबुझेर एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा पनि मान्छेले नै रथ तानिरहेका होइनन् । राजधानीमा पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्ड भन्दा अघिदेखि निरन्तर चल्दै आएका जात्रा, पूजा–अर्चना, मेला पर्व फगत तमासा होइनन् । ती रीतिथितसँग नेपाली पहिचान जोडिएको छ ।
नेपालको गौरव जोडिएको छ । हाम्रो आफनोपन त्यतै कतै छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका विभिन्न जाति, जनजाति समुदायमा प्रचलित लोक नृत्यको निरन्तरता लहडबाजी होइन । साकेला, झर्रा, कौरा, टप्पा, लाखे, हुड्केली, देउडा, सोरठी, ख्याली, चण्डी, भैरव नाच आदि अनेक नामले चिनिने नृत्य र तीसँग जोडिएका गीत वास्तवमा नेपालीपनका परिचायक हुन् । हरेकजसो जनजाति समुदायका बस्तीमा पुग्दा पाइने अलग अलग लोकसंस्कृति हाम्रो गौरवका विषय हुन् ।
नेपाली भूगोलभित्रका विभिन्न जाति, जनजाति समुदायको रहन सहन, जीवनशैली र लवाई खवाई नै असली नेपालीपन हो । तीसँगै जोडिएका संस्था, परम्परा र संस्कार हाम्रा अमुल्य निधि हुन् । सदियौंदेखि चल्दै आएका हाम्रा परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि देशभरि छरिएका, समुदायपिच्छे फरक नामले चिनिने गुठीहरूले सञ्जिवनी जस्तै बनेर सघाइरहेका छन् ।
तर, यतिखेर तिनै गुठीको विषयमा उब्जेको विवादले देश तरङ्गित भएको छ । नियम, कानून, व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले असल परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ । तर यहा उल्टो भयो । हुन संस्कृति मेटन नै सांस्कृतिक क्रान्ति गरिदो रहेछ । चिनमा त्यो देखियो भने नेपालमा त्यसको सस्करण यसरी प्रकट हुदैछ ।
हाल चर्चामा रहेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले परम्पराको जगेर्ना गर्नुको साटो निरन्तरतामै प्रश्न खडा गर्छ भन्ने चिन्ताले गुठीयारहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गरिएको विषय संसद्सम्म पुगेको छ । यही पृष्ठभूमिमा गुठीको विषयलाई खास भूगोल र समुदायसँग मात्रै जोडेर गरिएका टिप्पणीसमेत आइरहेका छन् ।
नाम र कार्यशैलीमा भिन्नता भएपनि देशभरफैलिएर रहेका गुठीहरू सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक निरन्तरताको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हुन् । सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण तिनको मूल ध्येय हो । त्यसैले दुईचार कमजोरीका उदाहरण देखाएर नेपालीपनसँग जोडिएको सिङ्गो परम्परालाई ’डिस्टर्ब’ गरिनु हुँदैन । नेपाली समाजमा यत्रतत्र समस्या छन् । खास समस्याको निदान गरी समाधान हुनुपर्छ । तर सिङ्गो परम्परालाई दखल पु¥याउनु किमार्थ ठीक होइन ।
पहिचान के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ । त्यसलाई व्यक्तिको तहमै छाडिदिनु ठीक होला । तर त्योभन्दा माथि पनि समुदाय र राष्ट्रको पहिचान हुन्छ । सिङ्गो समाज र राष्ट्रको पहिचानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । वर्तमान नेपालमा खण्ड(खण्डमा बाँडिएर पहिचान खोज्ने धुनमा समग्र नेपालको पहिचान कमजोर बन्दै छ । आलोचकहरूका शब्दमा गुठीसम्बन्धी विधेयकसमेत त्यसैको एक कडी हो ।
मन्दिर, मस्जिद, चैत्य, गुम्बा सबैमा आफ्नोपन देख्नु, सबै जात–जाति र धर्मको सम्मान गर्नु र तिनको संरक्षण गर्नुरगर्न सघाउनु नेपाली संस्कार हो । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त आज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरू र तिनका अजङ्गका संरचना प्रविधिको विकास नै नभएको युगमा निर्माण हुने थिएनन् । हालसम्म तिनको अस्तित्व हुने थिएन ।
सम्पदाको प्रत्यक्ष साइनो संस्कृतिसँग छ । संस्कृति र सम्पदा एकअर्काका परिपूरक हुन् । सम्पदा जोगाउने र संस्कृतिको निरन्तरतामा गुठीको भूमिका छ । गुठीजस्तै अरु पनि औपचारिक, अनौपचारिक संस्था र प्रचलन छन् । संस्कृति र सम्पदालाई ‘डिट्याच’ गरियो भने पहिचान जोगिएला ? संस्कृति जोगिएला ? आज हामीले हतारमा वा अज्ञानमा पहिचानको मर्ममा प्रहार र्गयौं भने भोलि पहिचान भेटिएला ? यी प्रश्न अहिलेका संगीन प्रश्नहरू हुन् ।
सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका गुठीसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानले सदियौंदेखि कुनै पारिश्रमिक, आर्थिक लाभ वा प्रतिफलको आशा नगरीकन सम्पदा संरक्षणमा लाग्नेहरूको चित्त दुखाएको छ ।विधेयकमा गुठीसँग संरक्षकको अपनत्व टुटाउने भाषाको प्रयोग भएको देखिन्छ । वास्तवमै संरक्षणको लागि दिलोज्यान दिनेहरूलाई पछि धकेलेर अवसरवादीहरू खेल्ने ’स्पेस’ प्रस्तावित कानूनको भाषामा पाइन्छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक खिचातानीको विषय नबनाई सच्चाउनेतिर लाग्नु उचित हुन्छ ।
सच्चिएनभने के होला ? पछिलला दिनका केही समाचार अंश त्यसका जवाफ हुन सक्दछन् ।
समाचार एकः गुठी विधेयकविरूद्ध वसन्तपुरमा विशाल प्रदर्शन । गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा विशाल जुलुस निकालिएको छ । ज्यापू महागुठी नेपास्को आह्वानमा भएको जुलुस वसन्तपुर नगर परिक्रममा गरी पुनस् वसन्तपुरमै पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो । विभिन्न प्लेकार्ड र मौलिक बाजागाजा बोकेर स्थानीयले गुठी विधेयकविरूद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यो विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । यसअघि काठमाडौंका गुठियारहरूसँगको छलफलपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका नाममा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको थियो । गुठियारहरूले भने मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई ‘भ्रमपूर्ण’ भन्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका छन । (जेठ ३२ )
समाचार दुइः गुठी विधेयकविरूद्ध पाटनमा पनि विशाल प्रदर्शन । गुठी विधेयकविरूद्ध पाटन, मंगलबजारमा बिहीबार आयोजित प्रदर्शनमा स्थानीय । गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंबाट सुरू आन्दोलतले तीव्रता लिएको छ । स्थानीय गुठियारहरूको अगुवाइमा चलेको आन्दोलन क्रममा बिहीबार पाटनको मंगलबजारमा विशाल प्रदर्शन भयो ।
साँझ ५ बजे मंगलबजारबाट सुरू जुलुसले पाटनका विभिन्न टोल परिक्रमा गरेको थियो । यो विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन । यसअघि काठमाडौंका गुठियारहरूसँगको छलफलपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका नाममा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
‘हामी आन्दोलनबाट एक इन्च पछि हटेका छैनौं,’ सरकारसँगको वार्ता र बिहीबारको छलफलमा समेत सहभागी नरदेवी गुठीका सचिव रामकाजी महर्जनले भने, ‘यसलाई अझ चर्काएर लैजाने हाम्रो निर्णय भएको छ ।’ सरकारले सडकको ‘सेन्टिमेन्ट’ नबुझेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘मध्यस्थता गर्ने नेताहरूलेनै हामी गुठियारहरूको भावना नबुझेको देखियो । हामी अब उनीहरूको भ्रममा पर्ने छैनौं । काठमाडौ, जागिसक्यो, विधेयक फिर्ता नभएसम्म चुप लाग्दैनौं ।’
२०७६ असार २, ०९: ०६: ०७